လာဘ်စားခြင်း အတတ်ပညာနဲ့ နုိုင်ငံသစ်တခုကုို တည်ဆောက်တဲ့အခါ ~ Htet Aung Kyaw
လာဘ်စားခြင်း အတတ်ပညာနဲ့ နုိုင်ငံသစ်တခုကုို တည်ဆောက်တဲ့အခါ
7:41 AM Htet Aung Kyaw 1 comment
လာဘ်စားခြင်း အတတ်ပညာနဲ့ နိုင်ငံသစ်တစ်ခုကုို တည်ဆောက်တဲ့အခါ
Tuesday, 20 January 2015, The Voice Daily.
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ဟာ (Investigative Journalist) စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး သတင်းထောက်တစ်ဦး အနေနဲ့ ခရီးသွားနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ သာမန်ပြည်သူတစ်ဦး အနေနဲ့သာ သွားနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီလို အတွင်းကျကျ ကိစ္စတွေကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်မယ့် အခြေအနေ မရှိသေးပါ။ ပြည်တွင်းရှိ သတင်းလောကမှာလည်း Investigative Journalist က အတော်အားနည်းသေးတယ်လို့ ဝေဖန်သူတွေက ထောက်ပြလေ့ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ယူနီဖောင်း ဝတ်ထားတဲ့ ကာစတန်အရာရှိတွေ ကိုယ်တိုင် တောင်းတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပစ္စည်းရွေးနေတဲ့ နေရာမှာ အကူအညီပေးတဲ့ ဝန်ထမ်းလိုလိုနဲ့ စောင့်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးက ကာစတန်ကိုယ်စား အခုလို တောင်းနေတာပါ။ မြန်မာငွေပေးလို့ မရဘူးလားဆိုတော့ “သူတို့က အစိမ်းမှ ကြိုက်တယ်။ ဒီက အခြေအနေကို အစ်ကိုလည်း သိသားနဲ့” ဆိုပြီး အဲဒီလူငယ်က ဆိုပါတယ်။
မြန်မာတွေရဲ့ လာဘ်စားခြင်း အတတ်ပညာအပေါ် အတော်စိတ်ပျက်နေတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ကံကဆိုးချင်တော့ ရှေ့နေက လာဘ်ပေးပြီး တရားသူကြီးကိုယ်တိုင် လာဘ်ယူနေတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုကို ထပ်ကြုံလိုက်ရပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို လိုက်ကူညီပေးတဲ့ အဲဒီရှေ့နေဟာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားကိစ္စတွေ၊ လယ်သမားကိစ္စတွေ၊ လူ့အခွင့်ရေး ကိစ္စတွေကို အခကြေးငွေမယူဘဲ စေတနာနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသူပါ။
ဒါပေမဲ့ အများမိုးခါး ရေသောက်နေတဲ့ နေရာမှာ သူတစ်ယောက်တည်း မသောက်ဘဲနေလို့ မရဘူးနဲ့ တူပါတယ်။ ငါးထောင်လား၊ တစ်သောင်းလားမသိ ထည့်ထားပုံရတဲ့ စာအိတ်လေးကို တရားသူကြီးထိုင်နေတဲ့ စားပွဲပေါ် ရှေ့နေက ချပေးလိုက်ပါတယ်။ တရားသူကြီးဘေးမှာ ထိုင်နေတဲ့ လက်ထောက်ဖြစ်ပုံရသူ တစ်ဦးက စာအိတ်ကို ယူသိမ်းလိုက်ပါတယ်။ စာအိတ်ထဲ ဘယ်လောက်ပါသလဲ ဆိုတာကို စစ်ဆေးနေတာမျိုး မတွေ့မိပါ။ ဒါဇင်နဲ့ချီရှိတဲ့ တခြားအမှုသည်နဲ့ ရှေ့နေတွေလည်း ဒီလိုလာဘ်ပေးခွင့်ရဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့နောက်မှာ တန်းစီတိုးနေလေရဲ့။
ဒီမြင်ကွင်းဟာ ရန်ကုန်က လူတွေအတွက် အထူးအဆန်း မဟုတ်ပေမယ့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ၂၅ နှစ်ကြာ ဝေးကွာနေတဲ့ ပြည်တော်ပြန်တစ်ဦး အဖို့တော့ ဒါဟာ တကယ့်အထူးအဆန်းပါပဲ။ ရှေ့နေကိုယ်တိုင်က လာဘ်ပေးနေပြီး တရားသူကြီးကိုယ်တိုင်က လာဘ်စားနေမှတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားရေးမဏ္ဍိုင်ကြီး သွားပြီပေါ့။
အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ကိုင်ထားတဲ့ အစိုးရနဲ့ ဥပဒေပြုမှုအာဏာ ကိုင်ထားတဲ့ လွှတ်တော်တို့ကို လွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်ရေးစနစ်နဲ့ ထိန်းထားရမယ် ဆိုတာဟာ ဒီနေ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ချီတက်နေပါတယ် ဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ကြီး မဟုတ်ပါလား။
ဒါက ကျွန်တော့်အမြင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီဖြစ်စဉ်ကို ရန်ကုန်နဲ့ ထားဝယ်မှာ တွေ့တဲ့ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြတော့ ဘယ်သူကမှ Shock မဖြစ်ကြပါ။ “မင်းကလည်းကွာ၊ ၅၀၀၀-၁၀၀၀၀ ကိစ္စကို အကြီးကြီး ပြောနေတယ်။ ဟိုးနေပြည်တော်မှာ သန်းနဲ့ချီစားနေတဲ့ ကိစ္စကျတော့ မင်းတို့ သတင်းထောက်တွေက ရေးရဲတာမှ မဟုတ်ဘဲနဲ့” လို့တောင် အပြစ်တင်လိုက်ပါသေးတယ်။
ရန်ကုန်မှာ ဆုံခွင့်ရတဲ့ တခြားပြည်တော်ပြန်တွေကတော့ ကျွန်တော်နဲ့ အမြင်တူကြပါတယ်။ သူတို့လည်း လေယာဉ်ကွင်းမှာ ကျွန်တော့်လို ကြုံခဲ့ရတဲ့အပြင် ဗီဇာတိုးတဲ့ကိစ္စ၊ လဝကရုံးဆီ သွားရတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ လာဘ်ငွေတောင်းတာနဲ့ ကြုံခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပြကြပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဖွံ့ဖြိုးပြီး အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလိုလာဘ်ငွေတောင်းခြင်းဟာ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ဖောက်ဖျက်မှုဖြစ်တဲ့ အပြင် ပြစ်မှုလည်း မြောက်ပါတယ်။
“လစာမလောက်လို့ လာဘ်စားတာကို အပြစ်မမြင်နဲ့ သူငယ်ချင်း။ ငါလည်စားတယ်၊ သူလည်းစားတယ်၊ မင်းလည်း ငါတို့လို ဝန်ထမ်းဖြစ်နေရင် စားမှာပဲ မဟုတ်ဘူးလား” ဆိုပြီး ဝန်ထမ်းသူငယ်ချင်း တစ်ဦးက စကားနာထိုးပါတယ်။
အားကစားထူးချွန်သူ အတော်များများ အကောက်ခွန်ဌာနမှာ အလုပ်ရကြပြီး လုပ်သက် ငါးနှစ်လောက်အတွင်း သူဌေးဖြစ်သွားကြလို့ ဒီလို စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပြိုင်ဘက် စက်ဘီးသမားတွေ၊ ကျောင်းနေဖက် ဘောလုံး၊ ဘော်လီဘောနဲ့ ပြေးခုန်ပစ်သမားတွေ ကာစတန်ဆီ ဝင်သွားတာ ဘယ်နည်းပါ့မလဲ။ ဆိုလိုတာက အကောက်ခွန်ဌာနမှာ တာဝန်ထမ်းချင်တာဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အခွန်တိုးရစေချင်လို့ မဟုတ်ပါ။ အကောက်ဂိတ်မှာ ထိုင်၊ လာဘ်များများစားပြီး တစ်ကိုယ်စာ သူဌေးဖြစ်ဖို့သာ ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ ဒါ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အဲဒီတုန်းက တကယ်ကြိုးစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဖြစ်စဉ်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ထူးခြားတာကတော့ အဲဒီလို တိုင်ကြားတဲ့အမှု ၅၀၀ ကျော် ထဲက သုံးမှုကိုပဲ ကော်မရှင်က စုံစမ်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ မြန်မာလွှတ်တော်က ဖွဲ့ပေးလိုက်တဲ့ အဲဒီကော်မရှင် ဆိုတာဟာ အမေရိကန်လွှတ်တော်က ဖွဲ့ပေးလိုက်တဲ့ ကော်မရှင်လို သြဇာမရှိလို့လား။ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားပြီသား နိုင်ငံတွေမှာ လွှတ်တော်က ဖွဲ့ပေးလိုက်တဲ့ ကော်မရှင်ကို အာခံရဲသူ ဘယ်သူမှမရှိ။ သမ္မတ၊ စစ်ဦးစီးချုပ်၊ တရားသူကြီး ဘယ်သူကိုမှ အလွတ်မပေး။
ဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်းက ထွက်လာတဲ့ နိုင်ငံတကာ အဂတိလိုက်စားမှု အခြေအနေ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (Transparency International- TI) အစီရင်ခံစာမှာတော့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၅ နိုင်ငံကို စာရင်းကောက်တဲ့အခါ မြန်မာနိုင်ငံက ၁၅၆ မှာ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရတက်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ခါစ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ အဆင့် ၁၈၀၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ အဆင့် ၁၇၂၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ အဆင့် ၁၅၇ အထိ လျော့ကျခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ တစ်ဆင့်သာ လျော့ကျခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါဟာ မနှစ်ကထက် ဒီနှစ် လာဘ်စားမှု ပိုဆိုးလာတဲ့သဘော ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါတွေကို ဘယ်လိုပြုပြင်ကြမလဲ။ အစိုးရဘက်ကလူတွေ အားလုံးနီးပါး လာဘ်စားမှုနဲ့ မကင်းဘူးဆိုရင် အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကကော ဒီကော်မရှင်ကို ဦးစီးဆောင်ရွက်နိုင်တာမျိုး မလုပ်နိုင်ဘူးလား။
ဒါကြောင့် လာဘ်စားမှုကို ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ် ဖြစ်နေပြီ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတတ်ပညာတစ်ခု ဖြစ်နေပြီဆိုပြီး ပေါ့ပေါ့ဆဆထား လို့မရပါ။ ဒါဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ချွတ်ချုံကျစေတဲ့ ဘေးဆိုးကြီးတစ်ခု ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို အားလုံးက လက်ခံသဘောတူဖို့ လိုလာနေပါတယ်။ အစိုးရ ဝန်ကြီးတွေဘက် ပြုပြင်ဖို့လိုသလို သာမန် နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီကလည်း ပြုပြင်ဖို့ လိုနေပါတယ်။ အဲဒီလို အခြေခံစိတ်ထားလေးတွေ မပြုပြင်နိုင်သေးသရွေ့ကတော့ ဘယ်လိုပဲ ကော်မရှင်တွေဖွဲ့ဖွဲ့ အလုပ်ဖြစ်ဖို့ မလွယ်သေးပါ။
ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းဆီ တက်လှမ်းရေး၊ နိုင်ငံတိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းတွေကို လာဘ်စားခြင်းယဉ်ကျေးမှုက နောက်ပြန်ဆွဲချနေဦးမှာ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
- See more at: http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/5496-lsh#sthash.KFuKNxxX.dpuf
Posted in: LEARNING MEDIA,LIFE IN MEDIA,TRAVEL
(The Voice Facebook မှ...)
U Tun Tunwin Ttw အင်း...ယူနီဖောင်းနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး....ကုလားထိုင်မှာထိုင်ပီး ကွန်ပြူတာရိုက်နေတဲ့ငနဲကတောင်းစားတာ...တကယ့်သူတောင်းစားအတိုင်းပါပဲ...ဘာတဲ့ ညီလေးလက်ဘက်ရည်ဘိုးပေးခဲ့ပါဦးတဲ့...စောက်ရှက်ကိုမရှဘူိး
Hlaing Myint Aung သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇတ်ပေါ့ အပြင် မှာအ
Mg Phoe Si နောက်တခါများကြုံခဲ့၇င်ပြောလိုက်ပါဗျာ မသာဖိုးေ၇ာယူထားမလားလို့ 
Lilly Thane december လတုန်းက နိုင်ငံခြားသားမိတ်ဆွေတွေကို မန်ဒလေး နန်းတွင်းကိုလိုက်ပို့ခဲ့တယ် ဂိတ်ဝမှာစောင့်နေတဲ့စစ်သားက ကိုယ့်ကိုguide လို့ထင်လားမသိပါဘူး လဘက်ရေဖိုးတောင်းတယ် ဂိုက်မှမဟုတ်တာ မပေးခဲ့ပါဘူး
Myint Htwe လ၀က တော့ အဆိုးဆုံးပဲ
Henry Thaw Tha Zin ဒါမြိုတွေကြတော့ comments သိပ်မတွေ့ရဘူနော်။ ဘာသာရေးကြရင် မကောင်းတဲ့ comment တွေများတယ်
Thar Din ကြုံဘူးပါတယ်။ ကိုယ်ပေးမှဖြစ်တာပါ။တရားဝင်သွားတယ် တရားဝင်ပြန်လာတယ်။ဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းတာဘာတခုမှမပါလာ မသယ်လာ ကြိုက်သလိုရှာ ဖွာသလန်ကျဲအောင်ရှာပြီးရင်တော့baggageထဲကunderwearကအစသေချာပြန်ခေါက်ခိုင်းပါ။ ကိုယ်မှန်ဘို့ပဲလိုပါတယ်။
Sanmyint Oo နိုင်ငံခြားကပြန်လာသူတိုင်း မြန်မာပြည်ရဲ့နွေးထေွးတဲ့ကြိုဆိုမှုတစ်ခုပေါ့
Cherry Aung ရုပ်ကြည့်တောင်းတာနေမှာပေါ့။ အပြစ်မကင်းသူလို့ထင်လို့နေမှာပေါ့။ ငါတို့များတခါမှမပေးရဘူး။ သံရုံးလည်းသံရုံးမို့လို့။ကျသင့်တာထက်ပိုမပေးခဲ့ရဘူးဘူး။ ပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုတောင်အံ့သြနေတာ။ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်လို့။
Mu Mu Myint Thar Din ပြောတာထောက်ခံပါတယ်
Aung Zay Ya Lin ကျွန်တော်တော့အပြန်ရောအသွားပါဘာမှမပေးရဘူး၊ဘယ်သူမှလဲဘာမှမတောင်းကြပါဘူး။ကိုယ်ကရိုးရိုးသားသားဆိုရင်တောင်းရင်လဲမပေးနဲ့ပေါ့။
George Ben ပြောမနေနဲ့ မောယုံဘဲကျားဖမ်း
Ag Thet Khine လစာတိုးပေးလိုက်လေ ပြီးတော့မှ တောင်းတဲ့သူတွေ မဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူတွေဖြုတ်ပေါ့ ခွေးတောင် အစာမကျွေးရင် အိမ်မစောင့်ပေးပါဘူး
Naing Naing ကိုထက်အောင်ကျော်ရေခင်ဗျားလဲမိုးခါးရေသောက်ခဲ့ရပြီလို့ထင်ပါတယ်
Pearl Aunggyi မပေးနဲ့ပေါ့ဗျာ
Wally Aung how embarrassing, same experience every year going thro' them, not paid enough rob the government not the taxpayers.SOBs.
U Khin Zaw ပေိးုလက်ပါ သနားပါတယ် ည KTV သွားဘို့နဲနဲလိုနေတယ်
Win Dell နှစ်နဲ့ချီပြီးတောင်းလာတာဆိုတော့အကျင့်ပါနေလို့ပါ
CE Kyin Thaung ရေကျသွားပြီ
Henry Thaw Tha Zin အမြဲတောင် ပါတယ်။ luggage မ ပါရင်လဲ တောင်းပါတယ်။ အထွက် မှာလဲတောင် ပါတယ်Beer ဖိုးတဲ့ အဲံဒါက တော့ ယူနီ ဖောင်ဝတ်ပါ။
Albert Yang ဒေါ်လာ၃၀၀အထိရတယ်လို့
Kan Myaing ပစ္စည်း သယ် ပေးတဲ. Porter တွေ ထားတာ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံ ဘဲ. ရှိတယ်။
Mann Nyan ကဲ-ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲ?????